Rooftop Snowmelt Heating System China Manufacturer
Description:Rooftop Heating System,Rooftop Heating Elements,Rooftop Snowmelt Heating
Home > Products > Fihetseham-pandrefesana ny fitrandrahana Snow systerm > Mafana ny hafanana hafanana ho an&#39;ny PipeGuard > Rooftop Snowmelt Heating System
Natao hisorohana ny fanodinana tafio-drivotra izay mety hiteraka fahavoazana, ny horonam-peon-tsakafo mipetaka dia vahaolana tsotra izay manakana ny tranokala tsy misy fangarony, voaolana sy simba. Raha vao tafapetraka ny lanezy , ny lanezy fanatanjahan-tena , dia manome antoka fa ny hafanana dia ampiharina any ambony tafo rehefa mihena ny hafanana rehefa mangatsiaka, ary manova ny hafanana mba hamonjena ny angovo rehefa tonga any amin'ny tafio-drivotra ny tafo.
Ny sarimihetsika fananganana fitrandrahana ny ranomandry dia ahitana ny teknôlôjia vaovao momba ny fanamainana - ny sarimihetsika PTC faran'ny hafanana.
Inona ny PTC?
Ny PTC dia midika hoe ny mari-pahaizana manokana. Tsy ilaina ny rafitra fanaraha-maso ny mari-pana. Izy io dia fomba fanamafisam-pahaizana kokoa izay tsy ilaina ny thermostat. Ny famokarana haingana dia haingana, miaraka amin'ny rafitra fanamafisam-peo izay mifehy tena ary ny hafanana dia mitovy amin'ny tontonana manontolo.
2.Traho voalohany milina fanontam-pirinty (W11mm, Fehezin'ny fizarana isaky ny 505mm) avy eo dia mametaka kofehy matavy, tavoahangy vita amin'ny hoditra ho an'ny T0.035 * W9.5 mm saribao vita amin'ny kofehy marefo,
Nankasitraka ny tombontsoanao izahay. Azafady mba lazao anay eto ambany info. Ho an'ny famandrihana anay ary mifandray aminay izahay hahita ny vahaolana tsara indrindra hotanterahinareo. habeny, max temperature, voltage, tightness, Application
b) Ho an'ny lamina goavana dia azontsika atao ny mampiasa courrier na entana sambo na mpandeha hafa.
Product Categories : Fihetseham-pandrefesana ny fitrandrahana Snow systerm > Mafana ny hafanana hafanana ho an'ny PipeGuard
Rooftop Snowmelt Heating System Contact Now
Mialà sasatra amin'ny alàlan'ny fantson-tsakafo Contact Now
Ny rafitra fanaraha-maso fanamafisana ny hafanana Contact Now
Miaro ny rafitra mpamokatra solika mafana Contact Now
Arovy ireo rafitra mpamokatra solika mafana amin'ny CE Contact Now
Ice sy Snow Fanasitranana systerm Contact Now
Afahao ny fiarovana amin'ny fantsom-pialofan'ny rano Contact Now
Ny fandehanana mihandrona kokoa ny fandalovan'ny rivotra madio Contact Now
Rooftop Heating System Rooftop Heating Elements Rooftop Snowmelt Heating Roof De-icing System Underfloor Heating System Trace Heating Systems Ceramic Floor Heating System Infrared Floor Heating System